Shiinaha Mashiinka Xawaaraha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah ee Shiinaha (Waxqabadyo Dual ah, oo loogu talagalay warqad qaro iyo mid khafiif ah) Sunkia
Aaladda Xawaaraha Sare ee Tooska ah ee 'UV Spot Varnishing' (Waxqabadyo Dual ah, warqad qaro iyo mid khafiif ah labadaba)
QALABKA HEERKA Qalabyada Ikhtiyaariga ah
Quudinta baabuurta Nidaamka Quudinta iyo Gaarsiinta Joogsi La'aanta
Qaybta daahan ee 'Multifunctional Coating' Qalabka Gawaarida horay-u-dhig
Nidaamka Qalajinta UV Rullaluistemka Anilox dhoobada
Qaybta Gawaarida Gawaarida
Feertada ballaarisay oo leh afar nuugid iyo lix dirasho, iyo spool wuxuu ku darayaa kanaal afuufa si uu warqad ugu diro si fudud oo fudud.
Front Side Lay Gauge
Goorta xaashidu gaadho qiyaasta jiifka hore, bidix iyo midig jiida midig ayaa loo dooran karaa. Mashiinka ayaa si dhakhso leh u joojin kara quudinta dareemayaasha marka xaashidu seegto ama dhammaato, isla markaa cadaadiska la sii daayo si loo ilaaliyo duubista hoose iyada oo aan loo baahnayn xaalad varnish ah.
Rullaluistemadka birta iyo rullaluistemadka leh rullaluistemadka cabbirka soo celinta iyo dhismaha xoqidda ayaa xakameynaya isticmaalka varnish iyo mugga si loo daboolo baahida alaabooyinka oo ay si fudud ugu shaqeeyaan. (Isticmaalka xajmiga iyo mugga waxaa go'aaminaya khadka qty ee rullaluistemadka anilox dhoobada ah)
Ka dib markii xaashida laga wareejiyo dhululubada cadaadiska loona wareejiyo xaashiyaha, xaashida waxaa lagu taageeri karaa hawo qaadista iyo si habsami leh u rogmaysa taas oo ka hortagi karta dusha sare ee xaashida in la xoqo.
Xakamaynta Pneumatic iyada oo loo marayo isha isha korontada waxay ku xisaabtamaysaa warqad otomaatig ah, hoos u dhac otomaatig ah, si gaarsiinta ay u noqoto mid aad u deggan. Qalabka gadaal ayaa si elektiroonig ah loo xakameynayaa, taas oo u oggolaaneysa tijaabada in si fudud, dhakhso leh oo nabadgelyo leh loola baxo inta lagu jiro kormeerka alaabada.
Suunka gaarsiinta sare iyo ka hoose ayaa sameysan kara
xaashida khafiifka ah si loogu soo rogo nidaamsan
iyo gaarsiin habsami leh.
Gelinta xaashida waxaa lagu gaarayaa kamarad iyo hawo wada duulaya si loo damaanad qaado xaashida si habsami leh loogu dhejiyo suunka gudbinta.
Guntin qaadashada waxay isticmaashaa saliid sifeyn otomaatig ah, waqtiga sifaynta waa la hagaajin karaa lana xakameyn karaa si loo gaaro sifaynta ugu fiican.
Ugu badnaan Xajmiga Xaashida
Min. Xajmiga Xaashida
Ugu badnaan Aagga Dahaarka
7200 xaashi / saacad
5200 xaashi / saacad
5000sheets / saacaddii
3000sheets / saac
42.8kw (saliid) / 44kw (biyo ku saleysan)
Aragti (L * W * H)
Hore: Mashiinka Xawaaraha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gaarka ah
Xiga: Aaladda Xawaaraha Sare ee Tooska ah ee 'UV Spot Varnishing' (Waxqabadyo Dual ah, oo loogu talagalay warqad qaro iyo mid khafiif ah)